Home News Madaxda Jabhada ONLF oo ku wajahan Magaalada Jigjiga
Madaxda Jabhada ONLF oo ku wajahan Magaalada Jigjiga
Wafti uu hoggaaminayo guddoomiyaha ururka ONLF ayaa maanta lagu waddaa in ay gaaraan Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Wafdiga ayaa shalay si weyn loogu soo dhaweeyay Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
Waddooyinka magaalada Jigjiga ayaa lagu sharxay calanka ONLF iyo calanka Dowlad degaanka Soomaalida.
Previous articleAfricom oo sheegtay in ay duqany ku dileen sargaal ka mida kooxda Al Shabaab
Next articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ku fashilmay sugida amaanka Magaalad Muqdisho
Dhambaalkii 2aad: Madaxweyne Dalka Badbaadi! Xelli Hogaamiye Damiir leh uu Aamuso ...